𝐀𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐡𝐨 𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢𝐚𝐧𝐢𝐧𝐚 | Ministère de la santé publique
𝐀𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐡𝐨 𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢𝐚𝐧𝐢𝐧𝐚
25 septambra Andro Maneratany ho an’ny Farmasianina :
Mitàna anjara toerana lehibe eo amin’ny sehatry ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tànana ny marary ny kalitaon’ ny fanafody ampiasaina.
Fanafody azo antoka, manaraka ny fenitra takiana ary nahazo alalana (AMM) no hita sy tsinjaraina eny anivon’ny farmasia na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana.
Nankalazaina androany 25 septambra teny Andrainarivo ny andro Maneratany ho an’ny farmasianina. « Ny farmasia, toky miara-dalana amin’ny fahasalamanao » no lohahevitra nentina nanamarihana izany tamin’ity taona 2021 ity.
Tonga nanome voninahitra ny fankalazàna , Prof. RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka. Ny Fitondram-panjakana ankehitriny dia maneho fisaorana ny fiankaviambe ny farmasianina tamin’ny anjara biriky goavana nentiny tamin’ny fiatrehana ny covid-19 teto amintsika.
Ampatsiahivina isika fa voararan’ny lalàna ny mivarotra fanafody tsy nahazoana àlalana izay mety hiteraka olana ho an’ny fahasalamam-bahoaka. Entanina araka izany isika rehetra hanjifa ny fanafody eny amin’ny toeram-pivarotana ara-dalàna izay efa natokana ho an’ izany ihany.